Brugmansia | February 2020
Editor Ee Doorashada February 27,2020
Ugu Weyn Ee Brugmansia
Brugmansia: noocyada ugu waaweyn ee "turumbooyinka malaa'igta"
Brugmansia waa xubin ka mid ah qoyska Solanaceae. Maanta waxaad ka heli kartaa lix nooc oo Brugmans ah, kuwaas oo koraayo bay'adooda dabiiciga ah ee ku yaalla hareeraha Koonfurta Ameerika, jawiga cimilada. Magaca dhirta ayaa lagu sharfay beerta carbeed ee Sebald Justinus Brygmans. Dadka reer Brugmansiya waxa badanaa loo yaqaan "turumbooyin malaa'igaha"
Canab oo ah taranka hiwaayadda V. N. Kraynova Zarnitsa
Caan, macaan, aan qabyo ahayn - baradho "Jukovsky early"
Ballanqaadka dhirta dabacsan ee wanaagsan - daaweynta abuurka ka hor inta aan la beeri. Miyaan u baahanahay inaan kala soocdo oo aan qoyo?
Sida loo sameeyo gurigaaga yaanyada qalalan
Kobcinta weylaha cusub: quudinta iyo farsamada quudinta
Maanta, qof kasta oo doonaya inuu abuuro beerkiisa gaarka ah uma baahna aqoon iyo xirfad gaar ah. Ka dib oo dhan, leh daryeel habboon, ku dhowaad dhammaan wakiilada dalagyada beerta soo saaraan dalagga wanaagsan oo deggan. Noocyo badan oo kala duwan oo geedo midho leh ayaa ku kori kara cimiladeena. Xitaa sida "waqooyiga" wakiilka sida pear Ussuri uu awood u leeyahay in uu xidid ku yeesho beerahayaga. Read More
Suurtogal ma tahay in la cuno toonta caleemo ama geed lagu beeray ciidda?
Sida loo daryeelo qolka gerbera ee dheriga
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Brugmansia 2020